URoy Plunkett kunye neNtsholongwane yeTeflon
UDkt Roy Plunkett wathola i-PTFE okanye i-polytetrafluoroethylene, isiseko seTeflon®, ngo-Ephreli 1938. Enye yezinto ezifunyenwe ngengozi.
Plunkett Ifumanisa i-PTFE
I-Plunkett ibambe i-Bachelor of Arts degree, i-Master of Science yesiganga, kunye ne-PhD yakhe kwi-chemistry ye-organic when he went to work in the laboratory de DuPont e-Edison, eNew Jersey. Wayesebenza ngegesi ezinxulumene neefriji zeFranon lapho ekhubeka kwi-PTFE.
I-Plunkett kunye nomncedisi wakhe, uJack Rebok, bahlawuliswa ngokuphuhlisa enye i-frijijini kwaye beza ne-tetrafluorethylene okanye i-TFE. Baye baphela malunga neeplani eziyi-100 ze-TFE kwaye babhekene neengxaki zokugcina konke. Bafaka i-TFE kwiincinci ezincinci kwaye bayabanda. Emva koko bekhangela kwifriji, bafumana iisilinda zingenanto, nangona beziva benzima ngokwaneleyo ukuba bamele bazalise. Bawucala ovulekileyo kwaye bafumanisa ukuba i-TFE i-polymerized powder, e-powder-polytetrafluoroethylene okanye i-PTFE resin.
I-Plunkett yayingumdlali ososayensi. Wayenayo into entsha kwizandla zakhe, kodwa yintoni enokuyenza nayo? Kwakuyi-slippery, i-chemically stable kunye neqondo eliphezulu lokukhatheka. Waqala ukudlala nayo, ezama ukufumanisa ukuba ingaba nenjongo nayiphi na injongo. Ekugqibeleni, umngeni wawuthatyathwa ezandleni zakhe xa ekhuthazwa aze athunyelwe kwihlulo ezahlukeneyo.
I-TFE ithunyelwe kwiSebe lePhando eliPhakathi laseDuPont. Iingcali zenzululwazi apho zazifundiswa ukuba zizame le nkunkuma, kwaye iTeflon® yazalwa.
Isisindo samathambo seTeflon® singadlulanga ngaphezu kwezigidi ezingama-30, okwenza kube yenye yeelekliya ezinkulu kakhulu ezaziwa ngabantu. Umphunga ongenambala, ongenasiphelo, umbane we-fluoroplastic kunye neepropati ezininzi ezinikeza uluhlu olubanzi lwezinto ezisetyenziswayo.
Umphezulu unotshabalala, akukho nto inamathele kuyo okanye ixhaswe yiyo-incwadi yeGuinness ye-World Records iye yabhalwa njengento ephantsi komhlaba. Kusekhona kuphela into eyaziwayo ukuba iinyawo ze-gecko azikwazi ukunamathela.
I-PTFE yaqala ukuthengiswa phantsi kwephawu lokuthengisa likaDuPont Teflon® ngo-1945. Akumangalisi ukuba iTeflon® yonyulwe ukuba isetyenziswe kwiiplanga zokupheka, kodwa yayisetyenziswa kuphela kwimigudu yezoshishino kunye nemikhosi ngenxa yokuba yayibiza kakhulu. I-pan yokuqala yokubamba i-pan esebenzisa i-Teflon® yathengiswa eFransi ngokuthi "Tefal" ngo-1954. I-US ilandele i-pan yayo ene-Teflon®-"Happy Pan" - ngo-1861.
I-Teflon® inokufunyanwa kuyo yonke indawo kule mihla: njengento ehlambulukileyo emigqabini, emaphepheni kunye nefenitshala, kwiimoto zomoya zomoya, izinto zokubamba iinwele, izibane, izibane, iimbane zombane kunye neengcingo ze-infrared. Ngokuphathelele ezo ipane zokupheka, zikhululeke ukuthatha i-wire whisk okanye nayiphina into efanelekileyo kubo - ngokungafaniyo kwiintsuku zakudala, awuyi kubeka engozini ukutshitshisa i-Teflon® ngoba iphuculwe. .
UDkt Plunkett wahlala kunye neDuPont kwaze kwaba ngumhlala-phantsi wakhe ngo-1975. Wafa ngo-1994, kodwa kungekafiki ngaphambi kokuba adluliselwe kwiHolo yePlastics of Fame kunye neHolo loLwazi lweSizwe.
UGeorge Stephenson: Inventor ye-Injini ye-Injini ye-Locomotive Engine
Iintlobo ezahlukeneyo zeJet Engines
Abangenayo bePlask Plug
Edward Craven Walker: Umngenisi weLava Lampu
Iqela leTennis: IJail kunye nehlabathi jikelele
Iphrofayili ye '80s ngaphantsi komhlaba Uhlobo lwe-Jangle Pop
Iimifanekiso eziPhambili zeMfazwe ezili-10 zexesha lonke
I-Beatles "I-Soul Soul"
2009 Kawasaki Vulcan 900 Edition Special Custom
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: I-Necessitare
4 kaJulayi Iiprojekthi zeNzululwazi
I-Biology Prefixes kunye neSaffixes: zoo-
Iiguba 101: Ngaba iiCigars Organic?
Imfazwe yaseJava Sea - iMfazwe Yehlabathi II